ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် အသက် ၁၃နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်အား ဖခင်ဖြစ်သူက အဓမ္မအကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၁၈ရပ်ကွက်၊ ဒေါ်ဖွားရှင်လမ်း(ကျူး) အခန်း ၃၌ သမီးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ၁၃နှစ်အရွယ် သမီးကို ဖခင်ဖြစ်သူက သားမယားပြုကျင့်နေကြောင်း စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ မိခင်ဖြစ်သူထံ ပြောပြ၍ […]
#Breaking_News စက်တင်ဘာ ၁၀ နိုင်လင်းဦး မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြို့သစ် (၅) ရပ်ကွက်ရှိနေအိမ်တစ်ခုတွင် အမျိုးသား (၄) ဦးနှင့်အတူ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရာတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများကို စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်က ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်း သိရသည်။ သတင်းအရ သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေး အတွက် ဆရာမနှင်းနုထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ…. Victoria လေး ပြောဆိုသွားသည်များကိုဆရာမနှင်းနုကြားပြီးလောက်ပါပြီ။ကလေးဆိုတာမညာတတ်ဘူး ဆိုတာ။မနှင်းနုလည်း ဆရာမတစ်ယောက်ပဲ။ မနှင်းနုကို ကျတော် ဖြစ်ရပ်မှန် ၂ ခုပြောပြချင်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန် ၁ ‘ဆိုကရေးတီးစ်’ ဟာ အမှန်တရားကို အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမှန်တရားနဲ့ ပါတ်သက်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ညှာတာထောက်ထားခြင်း […]
“မိန်းမသား တစ်​​ယောက်​အတွက်​ မလုံခြုံ​တော့ဘူးလား?” ည ၁၀နာရီကျော်က မိတ်ေ​ဆွတစ်ယောက် မုန့်ဟင်းခါး လာစားလို့ ဖုန်းဆက်တော့ အလုပ်ကိစ္စ ပြောဖို့လည်း ရှိတော့ အာရောဂျံ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ပေးဖို့ အောက်ဆင်းလာတော့ ကားလမ်းကူးဖို့ လုပ်နေတုန်း ကားတစ်စီးလာလို့ လမ်းဘေး ပြန်ရှောင်ပေးတာကိုမှန်တွေ အကုန် ချထားတဲ့ ကားနောက်ခန်းကနေ တစ်ယောက်က ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီး […]
ည ၁၀နာရီကျော်က မိတိဆွေတစ်ယောက် မုန့်ဟင်းခါး လာစားလ်ု့ ဖုန်းဆက်တော့ အလုပ်ကိစ္စ ပြောဖို့လည်း ရှိတော့ အာရောဂျံ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ပေးဖို့ အောက်ဆင်းလာတော့ ကားလမ်းကူးဖို့ လုပ်နေတုန်း ကားတစ်စီးလာလို့ လမ်းဘေး ပြန်ရှောင်ပေးတာကို မှန်တွေ အကုန် ချထားတဲ့ ကားနောက်ခန်းကနေ တစ်ယောက်က ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်း ဆူပြတယ် […]
( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) “ရွှေစွန်ညို..ဘာကိုလိုလို့ ..ဝဲတယ်…. မထွေးလိုလို့ ..ဝဲပါတယ်… မထွေးမပါ …ဒို့ချည်းသာ… ပါပါလျက်သား..နောက်ကထား… မထွေးအသားခါးလှတယ်… ချောင်းငယ်ရေနဲ့ ဆေးပါ့မယ်.. ချောင်းငယ်ရေချမ်း နွေမှာခမ်း….” ဆိုတဲ့ ရွှေစွန်ညိုသီချင်းလေးကို သားချော့တေးလေး အဖြစ် ပရိသတ်ကြီးတို့ ငယ်ငယ်က နားဆင်ပြီး […]